शक्तिशाली राष्ट्रलाई मात खुवाएको कोरोना भाइरसविरुद्ध ओली सरकारको आक्रामक लडाईं, तीन करोड नागरिक सुरक्षितNepalpana - Nepal's Digital Online
शक्तिशाली राष्ट्रलाई मात खुवाएको कोरोना भाइरसविरुद्ध ओली सरकारको आक्रामक लडाईं, तीन करोड नागरिक सुरक्षित
चैत्र ८ २०७६
चीनको वुहानबाट २ महिनाअघि फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विश्व अहिले आक्रान्त छ । युरोप, अमेरिका, भारतसहित विश्वका अधिकांश देश यसको चपेटमा छन् । संक्रमण र मृत्युदरले सबैलाई भयभित र चिन्तित बनाएको छ । हालसम्म १० हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने २ लाख भन्दा बढी संक्रमित छन् ।
यस्तो बेला नेपाल पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईमा होमिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमत स्थिर सरकारले कोरोनाविरुद्ध लडाईलाई तीव्रता दिएको छ । परिणामस्वरुप हालसम्म नेपालमा कोही पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छैनन् ।
सरकारले भाइरस चीनबाट युरोपतिर प्रवेशपछि सतर्कता तीव्र पारेको थियो । सुरुमा चीनको वुहानमा फसेका १७५ नेपाली विद्यार्थीको उद्दार गरेर राज्य र सरकारको अनुभूति नागरिकलाई दिएको ओली सरकारले त्यसयता कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेर कडा एक्सनमा उत्रियो ।
सुरुमा पर्यटन भ्रमण वर्ष र सगरमाथा सम्वाद स्थगित गरेको सरकारले त्यसपछि कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा चैत ५ गतेभित्र सक्न लगायो । ६ गतेदेखि हुने एसइई लगायत अन्य सबै परीक्षा स्थगित गर्योभ । भारतसँगका सीमा बन्द गर्‍यो । विदेश जानआउन रोक लगायो । भिडभाड र जमघट नगर्न भन्दै अनुगमनका लागि गृह प्रशासनलाई परिचालित गर्यो । सिनेमा हल, क्लब सबै बन्द गरायो ।
अर्कोतिर कालोबजारी नियन्त्रण गर्योग केही मात्रामा भए पनि । तेलका लागि लाइन हटे । भिडभाड हुन नदिन प्रहरी नै परिचालन गर्योग । त्यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विभिन्न ठाउँमा आकस्मिक बेड र आइसोलेसन बेड तयार पारेको छ ।
यसरी सरकार र नागरिक सचेत हुँदा देशले अप्रिय खबर सुन्न पाएको छैन । सबै नागरिक सुरक्षित छन् । ठूला र शक्तिशाली राष्ट्र कोरोनाका ‍अगाडि हारेका बेला ओली सरकारको सुझबुझ निर्णयले नै नेपाल सुरक्षित बन्न पुगेको छ। यसका लागि पुन: ओली सरकारलाई धन्यवाद । सबै सुरक्षित रहौं ।
चितवनमा ७२ घण्टामै अस्पताल तयार गरिको छ । जनचेतनाका कार्यक्रमहरु पनि पर्याप्त रुपमा सञ्चालन भएका छन् । यसरी कोरोनाविरुद्ध लडाईको तयारी भइरहँदा नेपालमा हालसम्म कोही पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका छैनन् । विश्वका देशको तथ्यांकमा नेपालमात्र कोरोना नभएको देशमा देख्न पाइन्छ । जून गर्वको कुरा हो ।
सरकारबाट यति गतिविधि हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार साझ देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अत्यावश्कबाहेक घरबाहिर हिँडडुल नगर्न आग्रह गरे । हालसम्म कोरोना संक्रमण नदेखिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै ओलीले कोरोना आउन नदिन सबै उपायहरु अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले यातायात बन्दको घोषणा समेत गरे ।
सबैभन्दा बढी भीड हुने यातायात क्षेत्र नै बन्द गर्नु एक सुरक्षित कदम थियो । जसको देशभर सराहना भइरहेको छ । विरामी हुँदाहुँदै पनि प्रम ओली सक्रिय हुनु, सार्क राष्ट्रप्रमुखको भिडियो कन्फ्रेन्समा सहभागी भएर नेपालको कुरा राख्नु, देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नु सराहनीय कदम हुन् । यसले अन्तत: नेपालीलाई नै फाइदा भएको छ ।
निश्चय नै नागरिकहरुको जीउधनको सुरक्षा राज्यको सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । जसलाई ओली सरकारले पूर्णरुपमा पालना गरिरहेको छ । परिणामस्वरुप कोरोना नेपाल प्रवेश गरेको छैन । यसअर्थमा बहुमतकोकम्युनिस्ट सरकार र प्रधानमन्त्री ओली धन्यवादका हकदार हुन । तीन करोड नेपालीलाई बचाउने ओली सरकारको प्रयासलाई हार्दिक सलाम । नागरिकले बल्ल सरकार भएको अनुभूति गर्दैछन् ।
अर्कोतिर ओली सरकारको कदम र प्रयासमा नेपाली जनताले दिल खोलेर साथ दिएका छन् । सरकारका निर्णय पालना गरेका छन् । कोरोना संक्रमणबाट बच्न हात धुने, भिडभाडमा नजाने, घरमै बस्ने काम नागरिकस्तरबाट भएका छन् । यसले अन्तत देशलाई नै फाइदा गर्छ ।
चैत्र ८, २०७६ शनिवार २३:३९:४० बजे : प्रकाशित
''गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता वारे पुनर्विचार गर्नु समयको तकाजा''
ति दलित अम्बेडकर, यी ब्राह्मण बाबुराम : अम्बेडकरको संविधानले आधुनिक भारत जन्मायो, बाबुरामको संविधानले बिद्रोह जन्मायो
वामदेव गौतमलाई युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्षको खुल्ला पत्र : इतिहास रच्ने कि कलंक रोज्ने?
अब नेपाली सेनाले अगाडि बढाउँदैछ नेपालको राजनीति, नयाँ कोर्स यस्तो देखिन्छ!
स्वास्थ्य सामग्री लिएर गृहजिल्ला पुगेका पर्यटनमन्त्री अरगरियालाई भव्य स्वागत
बाढी पहिरो पीडितको उद्धार र राहतमा जुट्यो तरुण दल, जितजंगले देशैभरी परिचालन गरे युवा